Liban Mohamed’s Story The torture chamber in the desert - Telling the Real Story
Liibaan Maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, kuna soo barbaaray magalada Borama, ee Somaliya. Wuxu qorsheyey mustaqbaliisa, sii uu helo waxbarasho iyo shaqo wanagsan, maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxu ka helay sawiro iyo faariimo saaxiibkiisa kaas oo tagay Yurub. Isla markiiba liibaan wuxu dareemay jahwareer taas oo ay keentay inay riyooyinkiisi waxbarasho iyo shaqo ay yaradeen. Ka dib wuxu doonay in uu tago Yurub. Wuxu la xidhiidhay nin ka mid ah kuwaa wax tahriibiya, kaas oo ka caawiyey inuu u safro Yurub, isaga oo sii marayaa waddanka Yemen, Suudaan, Itoobiya, Liibiya. Liibaan gaabi ahaan baa diyaar uma ahayn dhibaatooyinka iyo khatarta uu kala kulmay.
“ Wax fikir ah kama haysan dadka tahriibiyaasha, ama dhibaatooyinka I haysta, manay jirin cid I siisay macluumad sax ah, waxaan u malaynayay in safarkayga tahriibku u noqon doono mid Fudud. Maan uma maleynayn inu noqonayo sidaan xaqiiqda u arkay iyo wax ku saabsan. Aad iyo aad ayay uga fogayd xaqiiqada wixi qofkaasi ii sheegay”
Wuxuu tagey Yemen, halkaas oo loo qaaday tuulo yar oo ku taal xeebta badda Cas sii ay ugu sii sugaan rakaabka kale sii logu helo cid ku filan safarka doonta tagaysa suudaan. Waxayn ahayd in halkaas joogo hal bil. Dagaalkii ka socday yemen wuxu ku dhawaday Halka ay degan yihin, waxayna maqlayeen madaafiic iyo qaraxyo kuwaas oo ku dhawr kiilo mitir jira dhinaca buuraha.
Waxay u gudbeen dhinaca Suudaan iyada oo aan wax shil ah dhicin, laakiin markii ay yimaadeen, Liibaan waxa ku dhacday naxdin kale. Tahriibiyeyaashi cusub ee la wareegay waxay ahayeen qaar naxaris daran iyo rabshada badan. Kadib sagal maalmood oo socdaal ah oo saxaraha lagu jiray, Waxaa soo weraray budhcad kuwaas oo afduubta rakaabka, kadibna dib ugu iibiyaa dadka ka ganacsada dadka ee ku nool liibiya. Halkaas ayaa liibaan iyo qaar kale oo uu ka mid yahay lagu amray inay soo garacaan waalidkooda si ay lacag ugu soo diraan. Waa la garaacay, waxana loo gaystay jidh dil sii loogu qasbo inay qoysaskoodu u soo diraan si dhakhso ah lacaagta.
Ugu dambayntii waxay gaadheen xeebta liibiya, waxayna fuuleen doontii. Afar maalmood oo ay badda ku jireen, batroolkii ayaa ka dhammaday, waxaa aragtay diyaarada, waxaana isla markiiba soo gaadhay markaba liibiyan ah oo soo badbadiyay. Liibaan waxaa la galiyay xarun lagu hayo tahriibiyaasha, halkaas oo laga soo daad gureeeyay markii dagaalku ka qarxay halkaas. Wuxu sheegay in xaaladani ay kasii xun tahay, markii uu gacanta ugu jiray tahriibiyaasha, isla markaan wuxu ku qancay markii la siiyay fursad uu ku soo noqdo.
“ Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo laabtay wadankayga, sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan qeyb ka ahay ololaha wacyi-gelinta ee ka socda dalkayga , gaar ahaan dhinaca riyadaa beenta ah, waxaan ogahay in qofka aan safrin aanu khibrad u lahayan, laakin riyaada beenta waxba kama jiraan, aan ahayn jidh dil, dhimaasho, iyo dhibaaatoyiin kale”